जाने होइन त मातातिर्थमा हाइकिङ र साइक्लिङ गर्न ? - ParyatanBazar.com
जाने होइन त मातातिर्थमा हाइकिङ र साइक्लिङ गर्न ?
पर्यटन बजार१४ कार्तिक २०७८, आईतवार मा प्रकाशित
असाेज १४, काठमाडौं ।पछिल्लो समय घुम्नमा रुचि राख्नेहरु नयाँ नयाँ गन्तब्यको खोजिमा रहने गर्दछन । कोरोनाका कारण लामो समय घर मै बन्धक बनेका प्रकृतिका पारखिहरु हाल अवस्था सामान्य बने संगै भ्रमणको योजना समेत बुन्न थालेका छन ।
घुमन्तेको आजको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले नयाँ हाइकिङ र साइकल ट्रेलको रुट निर्माण गरेको छ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित चर्चित तीर्थस्थल मातातीर्थ आम काठमाडौं बासीका लागि चिरपरिचित गन्तब्य हो । सोही चर्चित स्थान मातातीर्थ कुण्ड दर्शन संगै छोटो रुटको शाहसिक गन्तब्यको समेत मजा त्यहाँ पुग्ने आगन्तुकले लिन सक्छन ।
यो ट्रेल संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) , नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले स्थानीय तहसँगको संयुक्त प्रयासमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दीगो पर्यटन परियोजना मार्फत तयार भएको हो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक मणी लामिछानेले यूएनडीपीले भियतनाममा सिधै रक बाँड्ने गरि सो मुलुकमा लैजान लागेको कार्यक्रमलाई बोर्डले नेपालमा कामका लाग सहायता उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको र सो प्रस्ताव स्वीकार भएसँगै नेपालका १६ सय पर्यटक मजदुरलाई कम्तिमा ४० दिनको रोजगारी दिन सकिने गरि यो कार्यक्रम तयार भएको बताएका छन ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले १० लाख र यूएनडीपीले साढे १० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत तोकिएको गन्तब्यमा कार्यक्रम अगाडी बढेको छ । यसै कार्यक्रमबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा हाइकिङ रुट र साइक्लिङ रुट तयार भएको हो ।
थोरै यात्रा धेरै मनोरञ्जन
यश गन्तब्यमा पुग्न अत्यन्तै सजिलो छ । रत्नपार्कबाट माततीर्थसम्मकै सार्वजनिक बस चल्छ । जहाँ पुगेर मातातीर्थ कुण्डको अवलोकन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि हाइकिङ यात्रा शुरु हुन्छ । यहाँ हाइकिङ गर्नेका लागि २.५ किलोमिटर लामो हाइकिङ रुट बनेको छ । जुन काठमाडौं आसपासका अन्य हाइकिङ रुटभन्दा सहज र छोटो पनि हो । सुन्दर वातावरण, हरियाली जङ्गल र जङ्गल को यात्रा लाई रोमान्चक बनाउन साथ दिने चराचुरुङ्गी को मधुर स्वर ,बीचबीचबाट देखिने शहरको झलकले यो यात्रा लाई थप यादगार बनाइदिन्छ।
साइक्लिङमा जानेहरुका लागि भने ६.४ किलोमिटर लामो रुट बनेको छ । साइकल ट्रेल निर्माणको काम अहिले पनि जारी छ । मातातीर्थ पदमार्गमा ११० जना र साइकल ट्रेल निर्माणमा भने २१४ जना पर्यटक मजदुरले तोकिएको दिन बराबरको रोजगारी पाएको बोर्डले जनाएको छ ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले धार्मिक पर्यटकलाई प्रकृतिसँग केही बेर रमाउने वातावरण बनाउन यो रुट महत्वपूर्ण हुने बिश्वास लिएका छन । यहाँ हाइकिङ रुट त पहिले पनि थियो तर ब्यबस्थित थिएन हाल यस पुनरुत्थान का लागि दिगो पर्यटन कार्यक्रम का कारण थप ब्यबस्थित र सहज रुट को निर्माण भएको समेत उनले जानकारी गराए ।
साथमा के के लिएर जाने ?
उकालो लागेपछि पसलहरु नभेटिने भएको कारण आवश्यक पानी, हल्का खानेकुरा र आफुलाइ आवश्यक अन्य सामानहरु भने तल बाटै साथमा बोक्नु राम्रो हुन्छ । मातातीर्थ झरिसकेपछि भने आसपासका रेष्टुुरेन्टमा खाना–खाजा पाइन्छ ।